एमालेको सरकार बन्यो र एमाले, माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेकपा बन्यो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी, जसले सुशासन र समृद्धिको सपना देखाएको छ, यस्तो सरकार बनेपछि देशमा हिंसाको मात्र भने बढेर गएको छ । किन ? यसबारेमा नेकपाभित्र पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, यसको निकास के हुनसक्छ, यसबारेमा राज्यस्तरमै पहिल्याएर अमल हुन जरुरी छ । हिंसाको अन्त्य गर्न सकिएन भने नेकपाको दुई तिहाईको सरकार हुनुको कुनै अर्थ र औचित्य रहनेछैन ।
देशमा ७ सय ६१ सरकार छन् । संघीय संसद, राष्ट्रियसभा, स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा मात्र होइन, केन्द्रीय सरकारमा समेत नेकपाको मजबुत नेतृत्व छ । हरेक तह र तप्कामा मजबुत नेतृत्व हुनु तर देशमा हिंसाको मात्रा बढ्नु, दण्डहीनता देखिनु र मानवाधिकारको मजाक उडाइनुले नेकपा सरकार असफल पार्ने षडयन्त्र भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको सरकार पनि असफल भयो भने यो देशको भविष्य अनिश्चित छ भन्न करै लाग्छ । यसकारण नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले किन हिंसाको मात्रा महामारीका रुपमा बढ्यो, हिंसा रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर पार्टी र सरकारमा छलफल गर्न जरुरी छ ।
नेकपा जेट विमान हो भनेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले त भनिदिए, जेटका पाइलटका रुपमा केपी ओली र प्रचण्ड विराजमान छन् । बढ्दो हिंसाले जेट विमान नोज डाइभ गर्‍यो भने नेकपाले जुन उद्देश्य लिएको छ, सुशासन र सम्पन्नताको जुन सपना देखाएको छ, त्यसलाई सोम शर्माको सपना बनाउने ? यसो हुनु भनेको नेकपाको हार हो, नेकपाको असक्षमता साबित हुनु हो ।
त्यसैले देशैभरि छरिएर रहेका, ७ सय ६१ सरकारमा जनप्रतिनिधिका रुपमा आआफ्ना स्तरबाट नेतृत्व दिइरहेका सबै जनप्रतिनिधिहरुले सजग भएर हिंसा न्यूनिकरण गर्न तात्ने हो भने हिंसा रोक्न सकिन्छ । हिंसाको जुन बाढी आएको छ, त्यसलाई छेक्न सकिन्छ । हिंसा रोक्नु भनेको विधिको शासन स्थापित गर्नु हो र विधिको शासन स्थापित गर्नु भनेकै सुशासन र समृद्धिको जग हाल्नु हो ।
बृद्धभत्ता ५ हजार गर्न नसकेकोमा देशैभरि विरोध छ । कर्मचारीको तलव नबढाउँदा देशैभरि आलोचना भइरहेको छ । प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलै आलोचना भइरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री छिन् थममायाँ थापा । उनले निष्कर्ष निकालेकी छिन्– जनप्रतिनिधि सजग भएमा महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । उनले यो कुरा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड सामु पुर्‍याउनु पर्छ र हिंसा रोक्न नेकपाका जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचालन गर्ने योजना आउन सक्छ । महिला राष्ट्रपति छिन्, केही अघिसम्म प्रधानन्यायाधीश महिला नै थिइन् । यद्यपि न्यायाधीशहरु महिला छन् । महिलामा प्रतिभाको कमी छैन । महिलालाई उठ्न नदिने, अवसर नदिने थुप्रै व्यवधानहरु पनि छन् । त्यस्ता बाधा व्यवाधान परम्परामा छ, संष्कारमा छ, धर्ममा छ, राजनीतिक सोचमा झन बढी छ । महिला सक्रिय नभएसम्म न हिंसा कम हुन्छ, न देशको सामाजिक सुधार र आर्थिक उन्नति नै सम्भव छ । महिलााई हिंसामुक्त समाजको सिर्जनाका लागि उत्तरदायी बनाउन जनप्रतिनिधिहरु एक भएर लाग्ने हो भने नेकपाले सत्तामात्र होइन, सामाजिक सुधारमा समेत बाजी मार्न सक्छ ।
नेकपाको सरकारका सामु कुनै चुनौति छ भने त्यो महिला, बालबालिका बृद्ध हिंसा नै हो । यो हिंसा रोक्ने ताकत कसैसँग छ भने त्यो जनप्रतिनिधिसँगमात्र छ । सरकार नेकपाको छ, जनप्रतिनिधि सलह जस्ता देखिन्छन् नेकपाका । यो शक्तिलाई हिंसाबाट मुक्तीका लागि हतियारको रुपमा उपयोग गर्ने हो भने महिलाहिंसा न्यूनिकरण हुनेछ र सरकारले, पार्टीले लिएको अभिष्ट सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा हुनसक्छ । चुच्चे रेल र समुद्रमा पानी जहाज, घरघरमा ग्यास र यातायातको बन्दोवस्त, विकासको लहर र सन्तुष्टिको प्रहर ल्याउनका लागि नेकपाको पंक्तिलाई प्रयोग गर्नतिर पार्टी र सरकार लाग्नु आजको बुद्धिमानी कदम हुनेछ ।
सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, स्वर्गजस्तो नेपाल बनाउने सरकारको ध्येय इमान्दार ध्येय हो । त्यो ध्येयलाई अर्जुन दृष्टिमा राख्ने हो भने नेकपा पार्टी र नेकपाको सरकारले तत्काल जनप्रतिनिधिलाई हिंसाविरुद्ध सजग बनाओस् ।
बन्न त २००९ मा हिंसाविरोधी कानुन बन्यो । बन्न त देशैभरि उपप्रमुख र महिला सदस्यहरु जनप्रतिनिधि पनि बने । तर आजसम्म महिला कानुनको पहुँचमा छैनन् । साँघुरिएर र चाउरिएर महिलाहरु बस्न बाध्य छन् । हरप्रकारका हिंसाबाट मुक्त समाज सिर्जना गर्नका लागि जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनैपर्छ । हिंसामुक्त समाजका लागि नेकपा नेतृ विन्दा पाण्डेको यो भनाई म सबैमा साझा गर्न चाहन्छु– ‘हामी महिला अर्नामेन्ट होइन, अर्गान हुन चाहन्छौं । हामीलाई फुली बनाउने, इयररिङ्ग बनाउने, औंठी बनाउने कार्य नगर्नुस् । जबसम्म समानता गर्नुपर्ने राज्यको अंगको रुपमा सम्बोधन गरिदैन र अंगको रुपमा लिइदैंन, जवसम्म अर्गान अंगको रुपमा अनुभूति दिइदैंन समाज सामाजिक न्यायको रुपमा विकसित हुँदैन ।